Biyo-dhaamin dilan ku sababta haweenka uurka leh ee xeryaha Beled-Xaawo - Radio Ergo
Biyo-dhaamin dilan ku sababta haweenka uurka leh ee xeryaha Beled-Xaawo
in Barakacayaasha iyo Qaxootiga, Wararkii u Danbeeyay, Xaaladda Xeryaha
(ERGO) – Wiilo Mustaf Xasan oo ah hooyada lix carruur ah, waxay ka mid tahay 142 haween oo tan iyo bishii Maayo ee sanadkii hore biyaha ka soo aroorta webiga marki ay meesha ka baxeen biyo si bilaash uga heli jireen tubbooyin xerada ugu jiray.
Wiilo oo si maalinle ah biyaha u soo dhaamisa ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay inay dhibaato kala kulantay jirkaan 20 Litar qaad ah oo ay la kuftay bishii Oktoobar iyadoo leh uur shan bil ah.
“Wabiga rafaadka aan ku qabbo hadda ka hor inaam ku dilmay oo kasoo aroortay,dilankii ilaah amarkii allaa hadda caafimaad aan ka helin mar xoogoo dhiig iga imaanaya illaa hadda lagu jiro dhib lagu qabbo biyahaas arooritaan kooda wabiga kasoo dhaaminaayo kaligeyaan ahay wax weyn oo cunug qaan gaaray oo hadda kaligiis biyyo soo dhaaminaayo ma haysto,waan iskaaga socdaa lee waan iska luudaa waa iskaga soo dhaansanaa saas oo ay tahay oo aan iskaaga socdaa.”
Waxay tilmaamtay in iyada oo aan helin daryeel caafimaad ay biyo aroorka dib u billowday bishii Diseember. 60 liitar oo biyo ah ayay labada galin soo dhaamisaa Wiilo.
Shan jirgaan oo labaatan qaad ayaa ku filan qoys ahaan maalinkii, awoodse uma laha iibsashada biyo firishyo oo laga helo xerada ay ku nool yihiin, kuwaas oo markii hore ay bilaash ku cabi jireen.
Raadiyo Ergo ayay u sheegtay in qoyskeeda oo nolol ahaan ku tiirsan yahay shaqooyin xoogsi ah isla markaana ay ka hesho lacag dhan $1.5 oo aan ugu filnayn inay u kala qeybiso cunnada iyo biyaha.
“Subax kasta lacag biyo lagu iibsado ma haysto. Waxaan u awoodi waayay biyahaas lacagtaas dhar dhaqaalka ah wax lacag fiican ma jiraan haddii xoogoo labo boqol boqol iyo konton boqol hadaad soo hesho kiilada bariiska iyadaa boqol iska ah iskaga gad caruurtii maxaa marka, suuga iyo waxaasna ma jiraan.”
Dhibaatooyinka ay haweenka kala kulmaan biyo aroositan ayaan ku ekayn culeyska jirkaanka oo ay masaafo dhan 5 km dusha ku soo qaadaan markiiba 20 liitar.
Haween 37 ah oo xerada deggan ayaa biyo aroorista uga haray markii ay ilmo ugu soo dilmeen caagga ay dusha ku soo xambaareen oo ay la kufeen.
Haweenkaas waxaa ka mid ah Salaado Maxamed Buule oo ah hooyada siddeed carruur ah. Waxay Raadiyo Ergo ayay u sheegtay in saddex saac ay ku qaadan jirtay socodka u dhexeeya guriga iyo webiga. Culeyska iyo masaafada dheer ay u dulqaadan jirtay laakiin dhib soo gaaray dartiis ay uga hartay dhaaminta biyaha bishii 12-aad ee sanadkii hore.
“Markii aan arooray jirgaan aan saarsaday ayaan la kufay markaasi ka bacdi ayay ilmaha sidaa iiga dilmeen, markii aan saaranayay ayaan la kufay oo ilmo shan bilood iga soo dilmeen.”
Salaado oo 34 jir ahWaxaa hadda biyaha u soo aroorta qoyskooda gabadha u wayn carruurteeda oo 14 jir ah.
Hooyadan ayaa tilmaamatay in tan iyo markii ay dhibaatadu soo gaartay ay dareemeyso xanuun badan. Waxay xustay inay heli waysay dhaqaale ay cisbitaal ku aado markii ay ilmuhu ka dilmeen.
“Xanuun waa jiraa dhiig baxbaa jiro dhabarka waa i kala go’anyahay,qof dilmay adigaba waad taqaan qof looma sheegayo xanuunka dilankaasi hadda dhabarka ayaaba ii daran.”
Xerada Ajuuraan oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 500 qoys ayaa abaar iyo colaado isbiirsaday ugu soo barakacay deegaannadoodii n intii u dhaxeysay sanadihii 2015 ilaa 2018.
Waxay biyaha heli jireen labo haamood oo uu u dhisay urur maxaliga ah ee Cosob oo ka shaqeeya arrimaha bini’aadannimada. Dadka maamula haamaha ayaa siddeeddii bilood ee ugu dambeysay billaabay inay dadka barakacay ka iibiyaan biyaha iyaga oo 40-kii liitar ka siiya 15 shilin oo lacagta kenya ah.
Waxaa arrintaas ka dhalatay in saddax meelood labo meel qoysaska xerada ku nool ay u aroortaan webiga Daawo markii ay awoodi waayeen lacagta biyaha lagu gadayo.
Qollaji: xayiraadda Covid-19 oo waxbarasho la’aan dhigtay in ka badan kun arday
Gedo: Xoogsatada cusbada oo wajahaya shaqo la’an kadib markii roob yari u qalaleen gododkii laga qodayay cusbada
Gedo: Xoogsatada cusbada oo wajahaya shaqo la'an kadib markii roob yari u qalaleen gododkii laga qodayay cusbada